Izvo App Zvinhu zvinosvika zviri pamutemo zveApple Watch | Ndinobva mac
Izvo Zvinhu zvezvinhu zvinosvika zviri pamutemo zveApple Watch
Kune akawanda maficha atiri kuona achiitika akazvimiririra eApple Watch, rangarira izvozvo maapplication eApple's smartwatch ave kutorwa pasi kubva kuchitoro cheapp pachayo uye isu tinogona kuzviita kubva pawachi pachayo.
Zvakanaka Zvinhu, ichi chishandiso chinobvumira vashandisi kuronga mabasa Nenzira yakasarudzika uye yakatsaurirwa, ichangobva kugamuchira rusununguko rweiyo iPhone uye izvozvi app yacho inowanikwa kurodha pasi zvakananga kubva kuApple Watch, isu tatova nekushandisa kwayo.
Tungamira kuwiriranisa neZvinhu Cloud
Uku kuwiriranisa kunoita kuti mushandisi weApple Watch arege kushandisa iyo iPhone zvachose, ikozvino unogona kunakidzwa neapp zvakananga kubva pawatch. Sezvakatsanangurwa nevakagadziri vekushandisa, vanga vachishanda padanho iri kubva kupera kwegore rapfuura vaine mhedzisiro yakanaka kwazvo maererano nekuvandudza uye kuenderana. Uyu wakanaka mutariri webasa watove nawo yako yega app yeApple Watch.
Zvine musoro kuti chishandiso chine mutengo uye izvi zvakangofanana nezvazvakaita muapp yeIOS, 10,99 euros. Zvishoma nezvishoma iyo native mapurogiramu eApple smartwatch Uye izvi zvakanaka kwazvo kukura chitoro ichi icho nhasi chave kutove nenhamba yakanaka yemapurogiramu anowanikwa uye akagadzirwa chaizvo pachigadzirwa Chokwadi vazhinji vanogadzira vanoramba vachishanda nesimba pane kwavo kunyorera nhasi kuti vatore ivo vakananga kuApple Watch app chitoro uye kuti havadi iyo iPhone kuti ishande.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Izvo Zvinhu zvezvinhu zvinosvika zviri pamutemo zveApple Watch
Podcast 11x26: Zvese izvo nezve iyo iOS 14
Mitemo mitsva muApple Chitoro kudzivirira kupararira kwecoronavirus